Home » blog » Hagaha Treadmills Hagaha
Magaca calaamadda ProForm Treadmill waxaa soo saaray ICON Health and Fitness. ICON Health and Fitness waa shirkad ku salaysan Utah oo diiradda saara qalabka jimicsiga. ICON Health & Fitness waxay leedahay lahjadaha treadmill dheeraad ah oo dheeraad ah oo ay ku jiraan NordicTrack, Healthrider, iyo Freemotion. Waxaad ogaan doontaa in unugyada treadmill ee nooc kasta oo isku mid ah ay tahay mid la mid ah haddii aad isbarbardhigeyso tusaalooyinka nooc kasta.
Magaca calaamadda ProForm ayaa si weyn u fiicnaaday dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxyaabo badan ayaa soo fiicnaaday in ProForm treadmill ay tahay taariiqda loo yaqaan "Boston Marathon". Xasuusnow si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro balaaran oo ah treadmills gudaha magaca calaamadahan. Waxtarkooda, dulqaadkooda, iyo qiimaha aad ayay u kala duwan yihiin.
ProForm wuxuu leeyahay khadado kala duwan oo loo yaqaan '2016'. Awoodda Taabashadu waxay ku dhexjiraysaa makiinadda qadada ah ee $ 999 ilaa $ 1999. Heerka hooseeyaha waxaa ku jira qaybta PRO iyo Boston Marathon Series, si kastaba ha ahaatee, cutubyadani waxay bixinayaan lacag dheeraad ah. Boston Marathon Treadmills waa mashiinada ugu horumarsan ProForm. Kuwani waxaa loola jeedaa ciyaartoyda saacadaha isku xiga.
Marathon treadmills waa xulashada ugu qiimaha badan ee ProForm. Waxay yihiin kuwo awood leh oo awood u leh inay ku taageeraan 4 daqiiqo mayl. Waxaa ka mid ah barnaamijyada tababarka maaratoonka loogu talagalay bilawga ah marka lagu daro ciyaaryahannada sare. Milkiilayaasha Boston Marathon Treadmill wuxuu la kulmi karaa boogaha la hagaajin karo, farsamo toos ah iyo hoos u dhac, iyo darajooyin fiidiyoow oo muuqaal ah oo lagu sawiray kooraska tartanka Boston. Nashaadyada waxaa lagu muujiyey 10 "screen touch screen.
Noocyada 2 waa Boston Marathon Treadmill 3.0 iyo Boston Marathon Treadmill 4.0. 4.0 waxay leedahay tiknoolajiyada SpeedRing. SpeedRing waa kantarool xawaaraha gacanta oo aan gacanta ku xirnayn oo adeegsanaya adeegyada Bluetooth.
ProForm wuxuu dhigayaa makiinada miiska saaran. Moodada mootada ee miiska ayaa ah ProForm Thinline iyo ProForm Thinline Pro. Qaybahan la isku hagaajin karo waxaa loo isticmaali karaa kumbuyuutarkaaga ama kombiyuutarka laptop.
Si ka duwan inta badan makiinada miiska saaran, mashiinka ProForm kasta wuxuu leeyahay dabeecad ballaaran oo lagu daboolay waxyaabo ay ka mid yihiin jilitaan / hoos u dhac, 30 ilaa barnaamijyada tababarka 40, iyo tignoolajiyada iFit.
Tartmaal Isboorti Xeeladeed
Naadiga ProForm Sport wuxuu ku qanciyaa dadka raadinaya qalab jimicsi oo dheeri ah. Inta badan muraayadaha waa 60 "dheer iyo mid kasta oo treadmill waa SpaceSavers. Moodhadhka SpaceSaver waxaa lagu dhejin karaa si toos ah si uu u xajiyo booska sagxadda. Treadmills Tartmaalayaasha Isboortiga ayaa leh jimicsi maxium 12% oo ay iFit awood u leeyihiin. Xubinnimada iFit ee si kastaba ha ahaatee waxaa loo gadaa si gooni ah. Mishiinnada miiqyadani waxay kala duwan yihiin 2.75 ilaa 3.5 HP.
Taxanaha Taxanaha Daraasada waxaa ka mid ah dhowr cutub. Mishiinnada cutubyadani waxay ka koobanyihiin 2.0 ilaa 2.75 CHP. Unugyada taxanaha waxqabadka waxay leeyihiin tababbarro ka duwan 10-12%.
Meelaha ay ka kooban yihiin cutubyadani waa ka gaaban yihiin in qaababka sare ee ugu sarreeya. Inta badan masalooyinka taxanaha taxanaha ah waa 55 "dheer. Treadmills Kuwani waxay kala duwan tahay $ 400- $ 800. Guud ahaan ballanqaadka qaybahan waa qaybo hal sano ah iyo hal sano oo ah foosha.
Tijaabooyinka Awoodda Korontada
Treadmills Series ProForm Pro waa tallaabo laga soo qaaday taxanaha Performance. Treadmills waxay u egyihiin kuwo isku mid ah, laakiin damaanada waa ka dheeraanayaan. The Awood 1495 waxay horseedaa Taxanaha Awooda. Waxay leedahay habayn iyo hoos u dhac, 10 "shaashadda taabashada, 34 oo lagu dhisay barnaamijyada tababbarka iyo qalabka wadnaha ee siman. Qaybaha korontada yar ee korontada ayaa lagu daboolayaa sanadaha 5. Qiimaha hoos ku xusan $ 1500, Power 1495 wuxuu ka mid yahay qiimaha ugu fiican ee ProForm ee dukaanka treadmill ee guriga caadiga ah. Mid kasta oo ka mid ah mashiinka ku jira taxanaha korantada wuxuu leeyahay shaashadda 3.0 ama 3.5 CHP, oo buuxa 20 "x 60", iyo 15% farsamo toos ah. Mid kasta oo ka mid ah taxanaha tamarta isiFit-diyaar.
Barnaamijka ProForm Pro wuxuu ka kooban yahay tignoolajiyad horudhac ah oo ka baxsan Marinka Tartmill Marathon. Waxaa jira taxadar 4 taxanahan. Mashruucyada kala duwan ee Proform Pro taxanaha laga bilaabo 3.5 ilaa 4.25 CHP. Tartammada taxanaha Pro waxay muujinayaan khadadka 15% marka lagu daro -3% hoos u dhac. Treadmills kuwaas oo sidoo kale iFit ku habboon. Treadmill kharashka ugu badan ee taxanaha Pro waa treadmill Pro 900. The Pro 900 treadmill ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay 2016 waxayna kuqirantahay 10 "touchscreen.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan Proform waa inay bixiyaan kiilo kiilo si ay ugu habboonaadaan miisaaniyad kasta. Qiimaha qiimaha waa $ $ 399 ilaa $ 3999. Haddii aad tahay qof daba socda, waxaad dooran kartaa qaab asaasi ah ama wax aad u fiican. Inta badan lafdhabarta naqshaduhu waa la duubi karaa. Suumanka cusub ee loo yaqaan 'treadmill' ayaa si fiican loo yareeyaa si looga badbaado shoog. Qaar ka mid ah tusaalooyinka qaaliga ah xitaa ha ogolaanin inaad joojiso boogta si ay u simaan tababarka dibadda. Shuruudaha adeegga dareenka ayaa kala duwanaan kara. Treadmill marathon ayaa dabooli kara qaybo ilaa sannadka 6. Qaar ka mid ah moodeeliyeyaasha miisaaniyadda ayaa si kastaba ha ahaatee waxay ku yimaadaan kaliya shahaadada shaqada 90-maalin si aad u hubiso inaad sameyso shaqaguriga guriga ka hor intaadan go'aansan inaad iibsato Treadmill Proform.